Olee otú iji a Green ihuenyo on iMovie
5.6 iMovie Theater h
A 'Green ihuenyo' mmetụta bụ mgbe ị na bechapụ isiokwu si n'ime a dere video ka na iji a green ọ bụ anụnụ anụnụ backdrop na mgbe ahụ superimpose ya jidesie ọzọ video clip. Otu ihe atụ ga-ọ bụrụ na ị ka ịdekọ onwe gị dị ka ụjọ n'ihu a green ndabere na mgbe ahụ ebe ahụ video on a clip na-egosi na a na-agba ọsọ ọdụm n'ebe ị. Ụda ịtụnanya, nri?
Nke a bụ otu ihe ahụ nkà na ụzụ na ọtụtụ nnukwu mmefu ego na fim na-mere n'ime nke-eme ihe nkiri na-egosi na-eme amaja ekwensu stunts dị ka amapụ site ogologo ụlọ ma ọ bụ ụgbọala na elu na-agba. O sina dị, m ebe a na-agwa gị na ugbu a, ị nwekwara ike ime ka a Green ihuenyo nkiri nke gị iji iMovie. Ka anyị na-a ngwa ngwa lee anya na nzọụkwụ abuana ke usoro a.
Nkebi nke 1: Olee otú ime iMovie Green ihuenyo on Mac
Nkebi nke 2: Olee otú ime iMovie Green ihuenyo on iPhone / iPad
Nkebi nke 3: Gịnị bụ 'Green ihuenyo' mmetụta?
Nzọụkwụ 1: Record a video iji a ọma udo, siri ike green ndabere na wee chekwaa ya na gị na Mac. Gbaa mbọ hụ na-enwe a oge na njedebe nke na ndekọ na-enweghị isiokwu na etiti dị ka ọ na-agwa iMovie, ihe a na a ga-ebipụ maka ndị na-video ga-karịrị.
Nzọụkwụ 2: Mwepụta na iMovie ngwa gị Mac na-amalite ọhụrụ oru ngo.
Nzọụkwụ 3: Gbaa mbọ hụ na Advanced Ngwaọrụ na-Switched on.
Nzọụkwụ 4: Site Project nchọgharị, họrọ video ị dere ya na green ndabere, ị nwere ike họrọ dum clip ma ọ bụ nanị otu etiti nso). Ozugbo ị ịdọrọ Nke a na nhọrọ ọ bụla nke mkpachị gị oru ngo, ọ ga-abụ nnọọ a na agba clip, ihe animated clip ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ video na ị chọrọ ka ọ na-karịrị ka, a popup window ga-emeghe elu. Họrọ nhọrọ nke 'Green ihuenyo' si ọhụrụ a window.
Nzọụkwụ 5: Ị ga-ahụ na Green ihuenyo clip ga ugbu a na-egosi n'elu ndabere clip na ị chọrọ iji na gị oru ngo. Iji kpatụ mmetụta, nanị ịdọrọ 4 nkuku ịgbanwe okpokolo agba nke clip. Mgbe ị gụsịrị-eme mgbanwe ndị a, pịa na 'Emela' button ịzọpụta iMovie Green ihuenyo mmetụta.
Gị video clip bụ njikere ugbu a na-egwuri na Green ihuenyo mmetụta.
Iji mee ka a Green ihuenyo video on iPhone ma ọ bụ iPad, ị ga-mkpa a Green ihuenyo ngwa na mgbakwunye na iMovie. N'ihi na nke a ndu, anyị ga-eji otu nke kasị mma Green ihuenyo ngwa si ​​n'ebe ahụ, Green ihuenyo Movie FX. Ị nwere ike ibudata ya na ebe a.
Nzọụkwụ 1: Iji malite ndekọ, guzo n'ihu a green ndabere ma ọ bụ ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, ẹkedori Green ihuenyo Movie FX ngwa gị iPhone ma ọ bụ iPad na see ndekọ bọtịnụ. Jupụta Green ihuenyo na ndabere na ihe ọ bụla otu n'ime preset nhọrọ nke ndụ mkpachị dị ka ezimezi oku ma ọ bụ n'ígwé ojii na ugwu, nanị enweta na-acha akwụkwọ ndụ òkè na gị iPhone ma ọ bụ iPad ihuenyo. Lee oyiyi n'okpuru na-egosi otú ndị na-eji ngwa agbanwe ndabere dị iche iche na Obere vidiyo.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo i dere video dị ka ị chọrọ, see Record button ọzọ Ka ịkwụsị ndekọ. The ngwa ga-akpaghị aka chekwaa faịlụ maka gị. Iji nweta gị ndekọ, pịa Ntọala na akara ngosi na top n'aka nri akuku nke ngwa window.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a, ị nwere ike mbubata a video gị na kọmputa n'ihi na ihe edezi na-enye ya a polished anya iji iMovie.
Nzọụkwụ 5: Ozugbo mere, ị dị njikere ịkọrọ egwu video ị kere iji Green ihuenyo mmetụta na ndị fọdụrụ nke ụwa.
Dị ka e kwuru na mbụ na isiokwu, Green ihuenyo mmetụta bụ mgbe ị na bechapụ isiokwu site na otu video mere na a green ọ bụ anụnụ anụnụ backdrop na superimpose ya jidesie ọzọ video clip na-eme ka a ọhụrụ video kpam kpam. Ọtụtụ nnukwu mmefu ego na fim na-mere iji otu technology. Lee ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mma Green ihuenyo mmetụta video n'omume na i nwere ike ịhụ n'elu internet.
Atụ 1 - https://www.youtube.com/watch?v=98M1tt4dTZc
Dị nnọọ a video na showcases ike na ọtụtụ ojiji nke 'Green ihuenyo' mmetụta.
Atụ 2 - https://www.youtube.com/watch?v=T1m0ORVdsQc
Video showcasing na n'azụ Mpaghara agbapụ nke na-ewu ewu Superman nkiri, Man nke Steel.
Atụ 3 - https://www.youtube.com/watch?v=Kjcv-JtUOgA
Lee otú ahụ a ma ama idaha nke matriks otop na Keanu Reeves ezere ọtụtụ mgbọ.
> Resource> iMovie> Olee otú ime iMovie Green ihuenyo on Mac / iPhone / iPad